Ukubuyekezwa kukaBelink GT-King we-flagship entsha (Amlogic S922X) | TeraNews.net
umbhali artem Kushicilelwe ku 01.06.2019
Funda isibuyekezo esisekupheleni kwendatshana.
Ekugcineni, abahleli bethu bathole iBelink GT-King.Sizozama ukukutshela ngokuningiliziwe nge-set-top box entsha, ngamakhono ayo, okuhle nokubi kwayo, futhi sizame nokuthola ukuthi kufanele yini ukuthenga.
Ake siqale ngezincazelo zobuchwepheshe.
Okwedlule 1 kusuka ku 3 Okulandelayo
CPU I-CPU S922X Quad core i-ARM Cortex-A73 ne-DM Cortex-A53 eyi-dual core
Isethi yokufundisa 32bit
RAM I-LPDDR4 4GB 2800MHz
I-ROM I-3D EMMC 64G
GPU I-ARM MaliTM-G52MP6 (6EE) GPU
I-Graphics Frequency 800MHz
Ukudonswa Kwasekelwa x HDMI, 1 x CVBS
Umsindo Yakhelwe-DAC x1 L / R, x1 MIC
Ethernet I-RTL8211F x1 10 / 100 / 1000M LAN
Bluetooth I-Bluetooth 4.1
WiFi I-MIMO 2T2R 802.11 a / b / g / n / ac 2,4G 5,8G
isikhombikubona DC JACK x1 12V 1.5A
I-X1 USB2.0 Port, x2 USB3.0 port
IX1 HDMI 2.1 Type-A
I-SPDIF x1 Optical
I-AV x1 CVBS, L / R
Isihlalo sekhadi le-x1 TF
IX1 PDM MIC
x1 Isamukeli se-infrared
I-X1 Inkinobho Yokuthuthuka
I-ОС I-Android 9.1
Питание Okokufaka kwe-Adapter: 100-240V ~ 50 / 60Hz, okukhipha: 12V 1.5A, 18W
Isisindo I-gram ye-189
Amafomethi wokusekela i-hardware desoding nezinqumo
Sekela i-decoder yamavidiyo amaningi afinyelela ku-4Kx2K @ 60fps + 1x1080P @ 60fps
Isekela amaseshini amaningi wokuvikeleka wevidiyo "avikelwe" amaningi kanye nokuhumusha kanyekanye
I-H.265 / HEVC Main / Main10 profile @ level 5.1 High-tier; kufika ku-4Kx2K @ 60fps
I-VP9 Profile-2 ifinyelela ku-4Kx2K @ 60fps
H.265 HEVC MP-10 @ L5.1 kuze kufike ku-4Kx2K @ 60fps
I-AVS2-P2 Iphrofayili kuze kufike ku-4Kx2K @ 60fps
I-H.264 AVC HP @ L5.1 ifinyelela ku-4Kx2K @ 30fps
I-H.264 MVC ifinyelela ku-1080P @ 60fps
I-MPEG-4 ASP @ L5 ifinyelela ku-1080P @ 60fps (ISO-14496)
I-WMV / VC-1 SP / MP / AP kuze kufike ku-1080P @ 60fps
I-AVS-P16 (AVS +) / AVS-P2 JiZhun Iphrofayli ifinyelela ku-1080P @ 60fps
I-MPEG-2 MP / HL kuze kufike ku-1080P @ 60fps (ISO-13818)
I-MPEG-1 MP / HL kuze kufike ku-1080P @ 60fps (ISO-11172)
I-RealVideo 8 / 9 / 10 ifinyelela ku-1080P @ 60fps
Ukupakisha kanye nemishini
I-Beelink GT-King yayigcwele phama, lonke ikhithi lilele ebhokisini elilodwa, ngokungafani, ngokwesibonelo, iBelink GT1 Mini kanye ne-Beelink GT1 Ultimate, ekuhlanganisweni kwayo lapho zonke izingxenye zazigcwele emabhokisini ahlukile. Ukulawulwa okukude kugcwele esikhwameni sepulasitiki, ikhebula le-HDMI lisontwe ngothayela lwentambo yokuphathelene, njengoba kunjalo nocingo oluvela kumbane.
I-unit supply supply
Ukulawulwa kwesilawuli kude (i-adaptha ye-USB efihlwe ngaphakathi kwesilawuli kude)
Umyalo omfushane (kufaka phakathi isiRussia)
Ngokwehlukile ngokulawulwa okukude. Isilawuli kude sisebenza kumabhethri we-2x AAA (angafakiwe), sixhuma kwikhonsoli nge-adaptha ye-USB engenantambo. Zonke izinkinobho kusilawuli kude ngaphandle kwenkinobho yamandla zisebenza kuphela lapho i-adaptha ye-USB ixhunyiwe. Inkinobho yamandla isebenza ngesitholi se-IR.
Okwedlule 1 kusuka ku 2 Okulandelayo
Isilawuli kude sine-gyroscope eyakhelwe ngaphakathi nenkinobho yokusesha ngezwi. Inkinobho yokusesha ngezwi ngaphandle kwebhokisi ingokwethula kuphela umsizi wezwi we-Google Assistant. Mayelana nokuseshwa ngezwi kuzinhlelo zokusebenza ezifakwe kukhonsoli, ngaphandle kwezilungiselelo ezingeziwe esikhulumi ngazo. Kepha ngemuva kokusebenzisa imizuzu eyengeziwe ye-10 yesikhathi, konke kungalungiswa
Zonke izinkinobho zokulawula okukude zisebenza kahle, inkinobho yamandla ingalungiselelwe izindlela ezihlukile, ukuvala, imodi yokulala, ukuqalisa phansi
Okwedlule 1 kusuka ku 7 Okulandelayo
I-Beelink GT-King ithole ama-design amasha, okokuqala yanda, isizathu esingahle sokwanda kosayizi wamacala phambi kweprosesa ephezulu, kanye nokuntuleka kokupholisa okusebenzayo. Okwesibili, kwaqoshwa logebhezi lwamehlo ngamehlo akhanyayo kuleli cala, esifundazweni amehlo aluhlaza, isibani sasemuva sihlotshisiwe.
Ngasohlangothini olungaphambili kukhona imbobo yemakrofoni eyakhelwe ngaphakathi yokusesha ngezwi. Onqenqemeni lwesobunxele kukhona i-2 yembobo ye-3.0 USB kanye ne-memory khadi slot. Onqenqemeni lomgwaqo kukhona isixhumi samandla, imbobo ye-HDMI 2.1, imbobo ye-USB 2.0, imbobo ye-SPDIF, ne-AV port
Azikho izixhumanisi onqenqemeni lwesokudla
Ngaphansi kwe-Beelink GT-King, kukhona okumaki (inombolo ye-serial) nomgodi wokusebenzisa imodi yokuvuselela
Launch kanye interface
Uma uvula iBeelink GT-King okokuqala, njengabo bonke abamandulelayo, iwizadi yokuqala yokusetha iqala, ikhethe ulimi, umkhawulo wesikhathi, njll.
Ngaphandle kwenguqulo evuselelwe ye-Android 9, isikhombimsebenzisi esiguqukayo asikashintshi, isiqalisi nesikrini sasekhaya kubukeka okufanayo
Okwedlule 1 kusuka ku 11 Okulandelayo
Izilungiselelo ze-prefix Beelink GT-King
Izilungiselelo ezilandelayo zitholakala kunguqulo ye-firmware efakwe kukhonsoli yethu:
Khombisa - Izilungiselelo zesikrini
Isixazululo sesikrini - Izilungiselelo zokulungiswa kwesikrini
Shintshela ngokuzenzakalelayo kusisombululo esihle kakhulu - shintshela ngokuzenzakalelayo kusisombululo sesikrini esihle kakhulu
Imodi yokubonisa (kusuka ku-480p 60 hz kuya ku-4k 2k 60hz) - ukukhethwa ngesandla kwesinqumo sesikrini
Izilungiselelo Zokujula Kwemibala - izilungiselelo zokujula kombala
Izilungiselelo zesikhala sombala - izilungiselelo zesikhala sombala
Isikhundla sesikrini - Izilungiselelo zokusondeza isikrini
I-HDR kuya ku-SDR - ukuguqulwa okuzenzakalelayo kwezithombe ze-HDR ku-SDR (kunconyiwe lapho kuxhunywa kwi-TV ngaphandle kokuxhaswa kwe-HDR)
I-SDR kuya ku-HDR - ukuguqulwa okuzenzakalelayo kwezithombe ze-SDR ku-HDR (kunconyiwe uma kuxhunywa ku-TV ngosizo lwe-HDR)
I-HDMI CEC - izilungiselelo zokulawula ibhokisi elisethwe phezulu nge-TV eyi-control kude (kude nawo wonke ama-TV ayayisekela, ngokuyisisekelo kukhona ukusekelwa kuma-TV asemuva kwakamuva ngemisebenzi ye-SMART, kodwa ngalawo ma-TV asekela le ndlela isebenza kahle.)
Audio Okukhiphayo - izinketho zokuphuma komsindo, ungakhetha phakathi kokukhipha nge-HDMI ne-SPDIF
I-Powerkey definition - Ukusetha isenzo inkinobho yokuvula / ukuvala ngokulawula okukude, ungaqala ukwenza okulandelayo: ukuvala umlomo, ukuya kumodi yokulala, ukuqalisa phansi.
Okuningi izilungiselelo - kuvula uhlu oluphelele lwezilungiselelo zedivayisi
Ukusesha ngezwi ku-Beelink GT-King
Ikhonsoli inokusesha ngezwi, kepha ngeshwa ukusesha akusebenzi ngaphakathi kwezinhlelo zokusebenza ezifakwe kwi-Beelink GT-King. Uma uqhafaza imakrofoni elawulwa kude, kuqaliswa uMsizi Wezwi we-Google. Ukuze ulungiselele usesho ngaphakathi kwezinhlelo zokusebenza ezifakiwe, kuzodingeka uchithe isikhathi futhi ushintshe izilungiselelo zangaphakathi zekhonsoli.
Ngokwesiko, siqala ngokulinganisa e-Antutu, isiqalo se-Beelink GT-King sithole amaphuzu angaphezu kwe-105
Ukuhlolwa okulandelayo kwe-Geekbench 4
Kumele kuqashelwe ukuthi ayikho neyodwa i-Android TV Box enezinkomba ezinjalo, lokhu empeleni kuyindlela entsha yokuqhuma kwe-android.
Kwindlela yokufaka umthwalo wokucindezela, izinga lokushisa laligcinwa ezingeni lama-73 degrees, ukumila ngesikhathi somthwalo omude kwakungu-13%
Sifuna ukuqaphela ukuthi uma usebenzisa izinhlelo zokupholisa zokuqala zakudala kwikhonsoli ngendlela yokuma nothile noma i-120 mm enkulu ebandayo, ukuqothuka kunyamalale ngokuphelele, futhi izinga lokushisa lihlala lisezingeni lama-69-71 degrees
Kuyaqapheleka futhi ukuthi uma usebenzisa ikhonsoli enhloso yayo ebukiwe, ukubuka ividiyo, akukho ukukhuluma mayelana nanoma ikuphi ukuqamba, ngoba Umthwalo we-CPU awufiki kumazinga abucayi kuwo wonke ama-cores ngasikhathi sinye. Ngokuqondene nemidlalo, ukubhula ngethrafikhi kuba khona, noma kungekho ngokushesha, kepha ku-gameplay akubonakali, ngoba iprosesa ngokwayo inamandla ngokwanele, futhi noma yehlise imvamisa yokusebenza kwe-cores ayithinti ukusebenza okuphelele kwekhonsoli.
Izindawo zokuxhumana zenethiwekhi
Ngokuqondene nokuxhumeka kwentambo, azikho izinkinga, ijubane elimenyezelwe ku1 Gbit liyiqiniso.
Kepha ukuxhumana kwe-Wi-Fi kunemikhawulo ethile, ku-2,4 Ghz ijubane liyahlukahluka ngokuzungeza i-70-100 Mbit, e-5 GHz, ijubane ligcinwa kwi-300 Mbit.
Empeleni umnyombo wale divayisi ukudlalwa kwevidiyo kusuka kunoma iyiphi imithombo. Lapho kuhlolwa ividiyo, Kidi ne-MX Player zazisetshenziswa. Njengoba isitoreji sevidiyo sisebenzise i-NAS Synology DS718 +. Izinto zevidiyo zaziqukethe iziqeshana zamavidiyo amaningi wekhwalithi ehlukile (4k, 1080p) nosayizi abehlukene ukusuka ku-10Gb kuya ku-100Gb.
Ukudlalwa kwevidiyo yasendaweni, ngenxa yeprosesa ephezulu ye-Amlogic S922X, kusebenza kahle, akukho okulandwayo, akukho ukwehla, wonke amafomethi wevidiyo adlala ngokushelela, abuyele emuva ngaso leso sikhathi.
Uma ubuka ividiyo ngentambo yenethiwekhi ixhunyiwe, nokudlala endaweni, azikho izinkinga ezembuliwe.
Kepha ngenkathi kuvivinywa ividiyo nge-Wi-Fi, bekukhona okuphawulayo. Lapho kuxhunywa imvamisa ye-2.4 GHz, amafayela kuphela afinyelela ku-30 Gb ngosayizi ayevame ukudlalwa, futhi ukuhlehlisa emuva kunokubambezeleka okude kakhulu. Lapho kuhlolwa imvamisa ye-5.8 Ghz, azikho izinkinga zokubusheleleka kwevidiyo kwaqapheleka, yize ngenkathi kubuyiswa emuva ukubambezeleka bekude ukuqhathaniswa nokuxhumeka kwentambo.
Noma kunjalo, ukuthola induduzo ephelele, sebenzisa uxhumano olunentambo njengokusheshisa okusheshayo.
Iphuzu elibalulekile, ngaphandle kokuthi umenzi abhale esithangamini ukuthi leli bhokisi elisethiwe alinakho ukusekela ama-codecs weDolbyTrueHD, DTS, iDolby Atmos, sisasenzile isivivinyo sokudlulisela phambili okuzwakalayo kula macodecs. Ukuhlolwa kwenziwa kwi-NAD M17 receiver, ibhokisi elisethiwe-phezulu laxhunywa nge-HDMI ne-SPDIF. Ngeshwa, akukho ukusekelwa impela, kepha la makhakhodi afakwe kudivayisi uqobo, kungenzeka ukuthi isimo sizothuthukiswa ku-firmware elandelayo, sizobe sigcwele silinde. Uma sinezindaba ngale ndaba, nakanjani sizokwengeza lesi sibuyekezo, futhi sishicilele imiphumela yokuhlolwa.
Lesi siqalo singabizwa ngokuthi umdlalo, kwikhonsoli ngisebenza kahle kakhulu ngisho nemidlalo "esindayo" kakhulu. Le midlalo elandelayo yethulwa esivivinyweni:
Umjaho wangempela 3
Njengoba bekulindelekile, azikho izinkinga ezabonwa kule midlalo, yonke into ihamba kahle ngaphandle kwama-friezes, njengoba nje kungatholakalanga trotting phakathi nomdlalo, kungenzeka ngokusebenzisa isikhathi eside i-console yomdlalo kuzophawuleka kakhulu, kepha uma kuhlolwa ikhonsoli yamahora we-1 ngokuhlukile Emidlalweni, isiqalo sasishiswa kuphela kuma-65 degrees.
Lesi yisithonjana sokuqala esangena emakethe ngoprosesa omusha we-Amlogic S922X omusha futhi ngokuqinisekile unamaphutha. Vele, iBelink izokhipha isibuyekezo se-firmware maduze esazothuthukisa ukusebenza kwayo futhi silungise amaphutha, kepha okwamanje, singafingqa ifulegi elisha
Iprosesa eshesha kakhulu kuze kube manje
Ukusekelwa kwawo wonke amafomethi wevidiyo nama-codec akhona
Amandla okusebenzisa ikhonsoli njengekhonsoli yomdlalo
Amandla okwenza ngokwezifiso ikhonsoli yakho ngokuguqula isiqalisi nokufaka ezinye izinhlelo kusuka ku-Google Play
Ukuba khona kwamachweba we-2x USB 3.0
Imvamisa ye-5 Ghz ukusekelwa umoya
Intengo Isiqalo somhleli wethu siye ngentengo ye- $ 119, intengo yamanje yekhonsoli ngaleso sikhathi sokubhala isibuyekezo $ 109.99, mhlawumbe ngemuva kwesikhashana intengo izokwehla futhi. Kodwa ngombono wethu ithegi enjalo yentengo inkulu kakhulu, intengo yesandulelo esinjalo kufanele ibe cishe nge-X XUMX.
Ukushisa nokuphamba. Yize ukushisa nokuphamba kwakubonwa kuphela esivivinyweni sokuxinzelela, zonke zazifana futhi uma uhlelo lokusebenza lokulayisha wonke ama-processor cores selwethulwa kukhonsoli, lapho-ke ukubhula ngembumbulu kungaphindwa
Yehlisa ukuxhumana kwe-Wi-Fi. Ngokukhishwa kweqiniso lokuthi abakhiqizi be-router bamemezele isivinini sokudluliswa kwedatha kunethiwekhi engenantambo ngokwesilinganiso sisuka ku-500 Mbit / s siye kwi-1,2 Gbit / s, imiphumela etholakele ngesikhathi kuhlolwa ibhokisi elisethiwe ingabhekwa njengengagculisi, ngisho nokucabanga ukuthi lokhu akuphazamisi nevidiyo nemidlalo.
Ukuntuleka kokusekelwa kweDolbyTrueHD, i-DTS, iDolby Atmos (ngethemba ukuthi lokhu kuzolungiswa kungekudala)
Ngokuvamile, besiyithanda kakhulu isiqalo, okwamanje empeleni kuyinhlangano entsha, kepha ukuthi sizotshela isikhathi esingakanani. Singasincoma lesi siqalo, ngaphandle kokuthi asinabancintisana.
Kulesi sigaba sizoshicilela izinto ezingeziwe nemiphumela yokuhlolwa okwengeziwe kweBelink GT-King
Ngemuva kwesonto kusebenza kwebhokisi elisethiwe, umsebenzi olawulayo owakhelwe ngaphakathi ngentambo ye-HDMI, ebizwa nge-HDMI CEC, wayeka ukusebenza, kwavezwa isizathu ngesikhathi sokuqulwa kwecala. Kuyavela ukuthi ikhebula le-HDMI elihlanganisiwe alinakho ukwesekwa kwe-HDMI CEC, futhi iqiniso lokuthi i-console ekuqaleni lalilawulwa ngale teknoloji liyisimangaliso. Ukuze lobu buchwepheshe busebenze, kuzodingeka uthenge ikhebula le-HDMI elihlukile elingaphansi kunhlobo ye-1,4, yize sincoma inguqulo ye-2.0
Ekugcineni, i-17.06.19 yenza isibuyekezo sokuqala satholakala nge-Beelink GT-King, 20190614-1907. Kulesi sibuyekezo, umenzi walungisa uhlelo futhi walungisa ezinye izimbungulu. Njengamanje siyahlola, sizobika ngemiphumela ngokwehlukile.
Bese umpompa isondo bese upenda imoto: I-ATL yatshela indlela yokukhetha i-compressor
Amawashi ahlakaniphile angcono kakhulu ka-2022 ngokusho kwe-w4bsitXNUMX-dns.com
Iwashi lokufaneleka i-Mobvoi TicWatch GTW eSIM
Kunengqondo ukuthenga i-Xiaomi Mi Band 7
Ikesi le-5G le-HUAWEI P50 Pro
I-Garmin Forerunner 255 kanye ne-Forerunner 955 - sebenzela izimbungulu
Umlutha Wezindaba Zomphakathi